[Review] Top 6 loại kem trị mụn cho bà bầu tốt, an toàn nhất | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Top 6 loại kem trị mụn cho bà bầu tốt, an toàn nhất | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 6 loại kem trị mụn cho bà bầu tốt, an toàn nhất | Muasalebang in Muasalebang
Mhlawumbe ngesikhathi sokukhulelwa, esikhumbeni sabesifazane abaningi abakhulelwe bavela amabala ama-acne angathandeki. Nokho, omama bangase besabe ukusebenzisa induna ukhilimu ngokwesaba ukulimaza umntwana ongakazalwa. Ngakho-ke abesifazane abakhulelwe bangasebenzisa imikhiqizo ye-acne ye-topical efanelekile futhi ephephile ku-fetus. Ake sifunde mayelana Ama-acne okhilimu angu-6 angcono kakhulu naphephile kwabesifazane abakhulelwe Ngiyacela.
1 Yini ebangela induna ekukhulelweni?
2 Ingabe abesifazane abakhulelwe kufanele basebenzise i-acne cream?
3 Ama-acne okhilimu angu-6 angcono kakhulu naphephile kwabesifazane abakhulelwe
3.1 3.1 Ukhilimu wokuqeda izinduna kwabesifazane abakhulelwe – i-Decurma New
3.2 3.2 I-Acnes Medical Cream yabesifazane abakhulelwe
3.3 3.3 Bhangqa ukhilimu wokukhulelwa waseJapan wabesifazane abakhulelwe 24g
3.4 3.4 Ukhilimu Wokukhulelwa Ka-Kiehl’s Blue Herbal Spot
3.5 3.5 I-Bioderma benign acne cream yabesifazane abakhulelwe
3.6 3.6 La Roche Posay Duo+ ukhilimu wokukhulelwa 40ml
4 Amanye amanothi lapho usebenzisa i-acne cream ephumelelayo kwabesifazane abakhulelwe
Yini ebangela induna ekukhulelweni?
Nazi ezinye izimbangela ezivamile zezinduna ngesikhathi sokukhulelwa:
Okokuqala, izinguquko ze-hormonal ngesikhathi sokukhulelwa ziyimbangela eyinhloko ye-acne. Ngenxa yokuthi ukukhulelwa kubangela ukwanda kwe-androgens, inani le-sebum elikhiqizwayo lizokhula. Ngaleyo ndlela, kubangele izimbotshana ezivalekile, kudala indawo yokuthi induna yakheke futhi ithuthuke.
Ngaphandle kwalokho, lapho owesifazane ekhulelwe, isimiso somzimba sokuzivikela ezifweni siba buthakathaka, isikhumba siyazwela, ngakho-ke kuyimbangela yamagciwane abangela induna kalula ukuhlasela isikhumba.
Ngokuvamile abesifazane abakhulelwe bavame ukuhalela ukudla okushisayo, okubabayo. Lokhu kubangela ukuthi isibindi sisebenze kanzima, sibangele ukushisa emzimbeni futhi ngaleyo ndlela sakhe izinduna.
Akukhona lokho kuphela, abesifazane abakhulelwe bavame ukulahlekelwa ubuthongo, banenkinga yokulala, ukuntuleka kokulala. Uma ukucindezeleka kuqhubeka isikhathi eside, kuzokwenza umsebenzi wesibindi nezinso ube buthaka, futhi ngesikhathi esifanayo, ubuthi obuningi buqongelela ngokuhambisana ne-sebum esikhumbeni, okudala izimo zokuthi induna ikhule.
Ngaphezu kwezimbangela zangaphakathi ezithintekayo ngenxa yamahomoni omzimba wesifazane, kukhona nemiphumela yangaphandle. Isibonelo, ukusebenzisa amanzi angcolile ukugeza ubuso bakho; Ukuchayeka nsuku zonke ezindaweni ezingcolile nezinothuli. Noma mhlawumbe ugqoke izimonyo eziningi kakhulu. Ngisho nokusetshenziswa kwezimonyo ezinamafutha kubangela izimbotshana ezivalekile, okubangela ukuthi induna ikhule kakhulu …
Ingabe abesifazane abakhulelwe kufanele basebenzise i-acne cream?
Mhlawumbe abesifazane abaningi abakhulelwe bazozibuza ukuthi kufanele basebenzise ukhilimu wezinduna? Ngokusho kochwepheshe, ukusetshenziswa kwezimonyo ngokujwayelekile kanye nokhilimu we-acne ikakhulukazi kwabesifazane abakhulelwe akufanele kube ngokunganaki. Isizathu siwukuthi ezinye izithako emkhiqizweni zibhalwe njengezinqatshelwe ngoba zingabangela ukukhubazeka kokuzalwa, ukukhubazeka kokuzalwa kanye nokuphuphuma kwesisu. Isibonelo, i-Isotretinoin namanye amahomoni omlomo kanye nama-antibiotic eqembu le-Cyclin njenge-tetracycline, i-doxycycline.
Ngaphezu kwalokho, kunezithako ezithile eqenjini lama-retinoids noma ezinye izithako ezisebenzayo ezibangela ukuxebuka okuningi kwesikhumba.
Kodwa, uma isimo se-acne kwabesifazane abakhulelwe siba nzima, sinezinguquko ezimbi, futhi sivame ukuba yingozi, abesifazane abakhulelwe bangayisebenzisa. induna ukhilimu kwabesifazane abakhulelwe. Ngaleso sikhathi, omama kufanele bakhethe ukhilimu we-acne ngezithako eziphephile nezilungile eziye zaqinisekiswa ochwepheshe. Isibonelo, i-Benzoil Peroxyde (BP) ngokulinganisela kanye ne-Azelaic Acid yisisombululo ongayicabangela. Qaphela, abesifazane abakhulelwe bangasebenzisa imithi yezinduna ikakhulukazi abesifazane abakhulelwe.
>>> Bona okuningi: [Review] Imikhiqizo engu-8 ehamba phambili ye-acne cream yesikhumba esinamafutha ka-2021
Ama-acne okhilimu angu-6 angcono kakhulu naphephile kwabesifazane abakhulelwe
Ngesikhathi sokukhulelwa, abesifazane bavame ukushintsha ama-hormone abo, okwenza isikhumba sikhule izinduna futhi sibonakale siguga. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwe-acne cream yisisombululo esihle kakhulu esisetshenziswa abesifazane abaningi abakhulelwe. Nazi Ama-acne creams angu-6 aphephile futhi asebenza kakhulu kwabesifazane abakhulelwe.
3.1 Ukhilimu wokuqeda izinduna kwabesifazane abakhulelwe – i-Decurma New
I-Decurma acne cream ingumkhiqizo ovela eVietnam okhishwe esithakweni esiyinhloko sesitashi se-turmeric esihlanzekile. Ngakho-ke, umkhiqizo unamandla okuphatha kahle induna futhi uvimbele izibazi. Ngaphezu kwalokho, ukhilimu we-Decurma acne uqukethe izinto eziphuma emaqabunga e-aloe vera namaqabunga e-lemon myrtle ukusiza ukugqamisa nokwenza isikhumba sibe mhlophe ngokuphepha. Ngesikhathi esifanayo, lawula i-sebum esikhumbeni, unciphise ukuphindaphinda kwe-acne.
Okugqamayo yilokhu imikhiqizo yezinduna kwabesifazane abakhulelwe Le gel isesimweni sejeli, ngakho-ke ingena kalula esikhumbeni futhi isebenze. Ngakho-ke, abesifazane abakhulelwe bangabhekisela futhi basebenzise ukhilimu we-turmeric we-acne Lokhu kuwukusunduza ngokushesha emuva “nenkani”, i-acne embi esikhumbeni futhi uphinde uthole ukuzethemba.
Intengo yesithenjwa: 79,000 VND/20g tube.
3.2 I-Acnes Medical Cream yabesifazane abakhulelwe
Uma owesifazane okhulelwe enesimo lapho ubuso bakhe bunezinduna eziningi ezivuvukele, izinduna ezimaholoholo ezifihlekile ngaphansi kwesikhumba, ungabhekisela ku-Acnes Medical Cream. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ukhishwa ezingxenyeni zemvelo, ulungile futhi uphephile kwabesifazane abakhulelwe.
Ngaphezu kwalokho, i-Acnes Medical Cream inomklamo weshubhu ohlangene, olungele ukusetshenziswa nokuthwala. Ngaphezu kwalokho, abesifazane abakhulelwe bangathenga i-Acnes Medical Cream ezitolo eziningi zezimonyo noma ezitolo zezidakamizwa ezweni lonke. Ukusetshenziswa okuvelele komkhiqizo akusizi nje ukuthuthukisa ngokushesha nangempumelelo induna, kodwa futhi kusiza ukondla isikhumba esinempilo, esipinki nesimhlophe.
Intengo yesithenjwa: 62,000 VND/18g tube.
>>>Funda kabanzi: [Review] Ingabe i-Megaduo acne cream inhle futhi iyasebenza?
3.3 Bhangqa ukhilimu wokukhulelwa waseJapan wabesifazane abakhulelwe 24g
Nini Buyekeza ukhilimu wezinduna kwabesifazane abakhulelwe Iluphi uhlobo oluhle alunakuzitshwa Bhangqa .ukhilimu wezinduna zivela eJapan. Ngoba i-Pair ithatheka ngabalandeli bobuhle futhi yaziwa nangokuthi “i-panacea” ekwelapheni izinduna.
Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo unezithako ezikhishwe emvelweni, ngakho-ke kufanelekile kwabesifazane abakhulelwe. Ngakho-ke, isimo se-acne singathuthuka ngokushesha nangempumelelo ngemva kwezinsuku ezingu-2-3 kuphela. Ngenxa yalokho, i-acne izokhushulwa phezulu ebusweni besikhumba okwenza kube lula kuwe ukuyisusa.
Akukhona lokho kuphela, ukhilimu we-Pair acne usiza futhi i-antibacterial esikhumbeni, i-astringent acne ngokushesha ngaphandle kokukhathazeka ngokushiya izibazi esikhumbeni. Ngakho-ke, abesifazane abakhulelwe bangakhetha ngokuphepha imikhiqizo okufanele bayisebenzise ngesikhathi sokukhulelwa okukhulu.
Intengo yesithenjwa: 150,000 VND/24g.
3.4 Ukhilimu Wokukhulelwa Ka-Kiehl’s Blue Herbal Spot
Esikhundleni salokho, ukhilimu kaKiehl’s Blue Herbal Spot Treatment induna wumkhiqizo wezinduna abesifazane abawuthembayo namuhla. Ngoba umkhiqizo unomphumela wokunciphisa ukuvuvukala, ukuqoqa induna eyomile ngokushesha nangempumelelo. Ngaphezu kwalokho, lesi sikhilimu se-acne sokukhulelwa sinokuthungwa kwe-gel, ngakho sithatha ngokushesha.
Mayelana nezithako zekhilimu yezinduna ze-Kiehl’s Blue Herbal Spot Treatment, ikakhulukazi ezivela ezithakweni zemvelo, iphephile futhi ayinabungozi kwabesifazane abakhulelwe. Ngemuva kokusetshenziswa, amabala e-acne, ama-acne okuvuvukala ngemva kokusetshenziswa kwezinsuku ezingu-2-3 anezimpawu zokuvuvukala nokuwa ngokushesha. Ngesikhathi esifanayo, ama-acne kernels omile, alungele abesifazane abakhulelwe ukuba bawasuse esikhumbeni.
Intengo yesithenjwa: 880,000 VND / 15g tube.
>>>Bheka ku: [Review] Okhilimu abamhlophe abayizinduna abayi-10 abahamba phambili ngo-2021
3.5 I-Bioderma benign acne cream yabesifazane abakhulelwe
Omunye wemikhiqizo yezinduna kwabesifazane abakhulelwe enconywe odokotela besikhumba abaningi yiFrench Bioderma. Umkhiqizo ulungile kakhulu, ulungele ngisho nesikhumba esibucayi futhi esicasula kalula.
Ukhilimu wezinduna kwabesifazane abakhulelwe lokhu Iqukethe izithako ezikhishwe emithonjeni eminingi yemvelo, ephephile esikhumbeni. Ngaphezu kwalokho, ukhilimu mncane futhi ulula, ngakho uma usetshenziswa, ungamuncwa ngokushesha ngaphandle kokubangela ukunamathela okungakhululekile. Akukhona lokho kuphela, umkhiqizo awunawo iphunga, ngakho-ke kufanelekile kubantu abangezwani nephunga lezimonyo.
Ngaphezu kwekhono lokwelapha izinduna, ukhilimu we-Bioderma usiza futhi esikhumbeni ukulawula i-sebum ngempumelelo, ukuvimbela izibazi ezimnyama, kanye nokuqinisa izimbotshana ngokuphepha. Ngaleyo ndlela, kusiza isikhumba ukuba sithambile, sibe mhlophe futhi sikhanye. Akukhona lokho kuphela, ungasebenzisa futhi ukhilimu njenge-primer makeup light.
Intengo yesithenjwa: 452,000 VND/30ml tube.
3.6 La Roche Posay Duo+ ukhilimu wokukhulelwa 40ml
Okokugcina, i-La Roche Posay Duo+ iwumkhiqizo ophuma kumkhiqizo odumile waseFrance ohlala uphezulu emikhiqizweni edume kakhulu emakethe namuhla. Ngoba ukhilimu unamandla okukhipha ama-acne ngokuphepha ngenxa yokuthi ukhishwa ezingxenyeni zemvelo, ezinempilo ezinhlobonhlobo eziningi zesikhumba.
Izithako eziyinhloko ze La Roche Posay induna ukhilimu ingashiwo ngokuthi i-Glycerin iyisithako esisebenzayo esiza ekwandiseni ukunwebeka, sinikeze umswakama odingekayo esikhumbeni Ngaphandle kwalokho, i-Niacinamide isiza isikhumba ukuthi sibe ne-antibacterial, anti-inflammatory, ikakhulukazi ukuthuthukisa ngokushesha amabala abomvu avuvukele, afiphele futhi abe mnyama.
Ikakhulukazi, kukhona futhi i-Piroctone Olamine ne-Capryloyl Salicylic Acid evimbela umsebenzi wamabhaktheriya ayingozi, igwema ukwakheka kwezinduna. Ngesikhathi esifanayo, vuselela amangqamuzana esikhumba, wondle isikhumba esithambile futhi esibushelelezi.
Intengo yesithenjwa: 350,000 VND / 40ml tube.
Amanye amanothi lapho usebenzisa i-acne cream ephumelelayo kwabesifazane abakhulelwe
Ukuqinisekisa ukusetshenziswa induna ukhilimu kwabesifazane abakhulelwe Ukuze uthole ukusebenza okuhle, kunezinto ezimbalwa okufanele uzikhumbule:
Kufanele ukhethe ukhilimu ofanele isimo kanye nemvelo yesikhumba sakho. Kanye nokubheka ukuthenga izindawo ezihloniphekile nezisezingeni eliphezulu. Lokhu kuzogwema ukuthenga izimpahla zomgunyathi, izimpahla zomgunyathi ezenza izinduna zibe zimbi kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, ungathengi futhi usebenzise izimonyo ezintantayo, zemvelaphi engaziwa, ukuze uqinisekise ukuphepha kombungu.
Ngaphezu kwalokho, abesifazane abakhulelwe kufanele banciphise inqubo yokunakekelwa kwesikhumba, ikakhulukazi lapho isikhumba sinezinduna eziningi. Ikakhulukazi ungasebenzisi ama-creams aminyene enza isikhumba singacacile, kwandisa ingozi yokwakheka kwezinduna.
Qaphela ukuthi i-exfoliation yamasonto onke ngemikhiqizo emnene ingasetshenziswa ngama-mask amafomula athambile emvelo akhiphayo.
Kufanele usebenzise ukuvikela ilanga ezifanele, gwema ukuchayeka ezindaweni ezinothuli oluningi nokungcola okuthinta isikhumba.
Ngaphandle kokunakekelwa kwesikhumba kanye nokwelashwa kwama-acne okuvela ngaphandle, abesifazane abakhulelwe kufanele bakhe ukudla okunempilo. Ngesikhathi esifanayo, yiba nesikhathi esanele sokuzivocavoca nokuphumula ukuze ubambe iqhaza ekuthuthukiseni ukusebenza kahle kokwelashwa kwezinduna nokwandisa ukumelana komzimba. Ngaphezu kwalokho, lokhu kusiza nasekuthuthukiseni impilo yabesifazane abakhulelwe kanye nezinsana.
Ngenhla ukwabelana ngolwazi mayelana nezinhlobo ezithile I-acne cream yabesifazane abakhulelwe inhle futhi iphephile ukusiza abesifazane abakhulelwe babe nokukhetha okuningi ekwelapheni induna. Abesifazane abakhulelwe kufanele baqaphele ukugwema ukuthenga nokusebenzisa imikhiqizo esezingeni eliphansi ethinta isikhumba nengane.
>>>Funda kabanzi: [Review] Ingabe i-Eucerin acne cream inhle? Okwakamuva ngo-2021
Xem Thêm Cơ chế hoạt động, tác dụng của kem chống nắng và cách sử dụng hiệu quả | Muasalebang
[Review] Top 3 Máy xay Osaka loại nào tốt, bền nhất hiện nay | Muasalebang
Có bao nhiêu loại pin, ắc quy trên xe máy điện? Loại nào tốt nhất? | Muasalebang